Withdrawal Policy | Top Slot Site | famba & Online £5 FREE | £€$800 Bonus :)
When a member requests a withdrawal, Mari akakumbira vari hwakatamisirwa muripo nzira(S) pakutanga nhengo rinoshandiswa kuchengetesa.
In cases where a member's payment method is not available for withdrawal due to third party policy restrictions, ari kurega vachaitwa mumwe muripo nzira riwanikwe nhengo.
Kana nhengo ane kunoshamisa deposits kuna TopSlotSite , isu kuchengetera kodzero kumbosendeka kana kumisa kurega mari kusvikira deposits vose vakagamuchira nekusimbiswa.
Hatidi mhosva chero kurega mari yechikoro (pasi chikamu 5 pazasi). Should a member's bank or payment method charge a processing fee in connection with the withdrawal, kuripwa muripo uyu mutoro nhengo.
Mune imwe nyaya apo isu kurega kupa minamato yedu chaiyo utongi, zvine kugadzira muripo angachajwa kuti nhengo pamusoro kurega.
Ibasa ari nhengo kuzivisa TopSlotSite pakarepo munhu akarasika kana zvakabiwa chikwereti / debit kadhi kana kuchinja mashoko kuti e-chikwama; chero nekufirwa uye kunokanganisa unobva kukundikana pamusoro chikamu nhengo kupa pakarepo ziviso akadaro achava kutakurwa zvinongobva pedyo nhengo, uye TopSlotSite haangavi nemhosva chero nekufirwa uye kukuvadza akadaro.
Minimum WIthdrawal zvakafanana
CHERECHEDZA: Akakumbira kurega rakawandisa vari pazasi shoma mazakwatira dziri pamusoro haangazozikamwi kupatsanurwa.
Visa zvikwereti uye debit kadhi withdrawals havasi kuwanikwa dzimwe nyika nokuda omunharaunda issuer kurambidzwa.
Mastercard uye debit kadhi withdrawals havasi kuwanikwa nokuda issuer kurambidzwa.
The kunonyanyisa kurega mari pa nhoroondo iri (ini) $3,000 / €3,000 / £3,000 / 30,000Kr pavhiki, uye (Ii) $6,000 / €6,000 / £6,000 / 60,000Kr pamwedzi, except in the case of progressive jackpot winnings, where the maximum withdrawal amount per month is $30,000 / €30,000 / £30,000 / 300,000Kr. TopSlotSite may, panguva yayo chete ungwaru, kuwedzera zvatinorambidzwa izvi kuti ayo nhengo kumukoshesa.
Chiyereso kudzivirira nhengo kubva paIndaneti kubiridzira, TopSlotSite dzimwe nguva zvinoda nokuzivikanwa ongororo asati processing ari kurega. Members anogona kukumbirwa kuratidza mumwe kana kupfuura apa magwaro (kana mamwe magwaro asina pasi apa) kuna TopSlotSite:
Credit / debit kadhi rinoshandiswa mari imwe TopSlotSite nhoroondo: A pachena, verengeka kopi mativi ose kadhi runodiwa. For chibatiso zvikonzero, the middle eight numbers on the front of the card and the three-digit code on the back of the card's copy must be crossed out.
Uchapupu kero: This can come in the form of a recent utility bill or credit card statement that shows the member's full name and address as listed in his/her TopSlotSite account. Nokuti kadhi mitsara, pakati nhamba sere nechemberi kadhi uye-digit matatu bumbiro iri seri kadhi anofanira vayambuka panze kuchengeteka zvikonzero.
Photo ID: A achangopfuura nezvezviratidzo gwaro Photographic kunodiwa kuti nhengo kuti ironge withdrawals avo okutanga. The ID inogona gwaro musoro pasipoti, driver's license or national ID card. The member's name, mufananidzo uye siginicha anofanira kuonekwa pamusoro kopi akatumira TopSlotSite. Mune zvimwe zviitiko, nhengo anogona kukumbirwa kuti magwaro avo akasaina ndokusimbiswa achishandisa anokwanisa gweta kana gweta sezvo uchapupu Mvumo.
Please kuudzwa kuti zvose Cash panze zvikumbiro vachaonekwa sezvo "kudzamara" nokuti 3 mabhizimisi mazuva, panguva Unogona kubvisa chikumbiro.
kutengeserana Your uye ruzivo zvemari unodzivirirwa pana TopSlotSite kubudikidza zvemberi kuchengeteka uye encryption michina iri indasitiri. Unogona kuvimba nesu zvokungonakidzwa uye njodzi uchitamba mutambo wacho. Rubatsiro pamwe withdrawals kana mumwe nyaya, inzwa wakasunungukaTaura nesu
The okuwedzera mapepa chinodiwa achava mutemo unoti apo yako cumulative withdrawals wakabura £/$/€1500 kana 15,000kr.
Zvaida mapepa zvichabviswa akapa mukati 7 Mazuva dzinotevera chikumbiro ari Company; vanofanira zvinyorwa haana kupiwa mukati timeframe ichi, kana dzenhema kana kutsausa mapepa kana akapa, ipapo Company vangasangana, panguva ndiko chete kungwara, vanodimbura nhoroondo yako, torera winnings zvose uye dzokuzvitorera uye maturo ose zvawo nhoroondo nepakati
Pasina derogating kubva mamwe urongwa iyi kurega itsika, pamberi chero withdrawals vari kupatsanurwa, kutamba yako kudzokororwa ipi neipi mugari nokutamba masaisai. ari Company vanofanira deem kuti MUGARI mutambo kutamba kwakaitika, ari Company nehwemweya kodzero vasabhadhara chero withdrawals, torera uye / kana torera pakuenzanisa nhoroondo yako uye / kana kuvhara nyaya yako.